Ahoana ny fampifanarahana ny kalandrie Google 2 | Martech Zone
Miaraka amin'ny fahazoana ny maso ivoho ary miasa ho mpiara-miasa amin'ny vaovao Mpiara-miasa Salesforce, Manana olana aho amin'ny fihazakazako roa G Suite kaonty ary manana tetiandro 2 ho tantanana. Ny kaontiko taloha dia mbola mavitrika ampiasaina amin'ny famoahana sy fiteniko - ary ny kaonty vaovao dia natao Highbridge.
Na dia afaka mizara sy mahita ny kalandrie tsirairay amin'ny hafa aza aho dia mila mampiseho fotoana avy amin'ny kalandrie hafa isaky ny be atao. Nikaroka izay vahaolana rehetra aho… ary ny hany fomba nahafahako nanao izany dia ny fanasana ny kaonty hafa isaky ny hetsika, izay ratsy tarehy tokoa ary mety hiteraka korontana amin'ny mpanjifa.
Ny tena manan-danja kokoa aza dia ny fananako fandaharam-potoana handamin-tena isaky ny kalandrie. Izany dia nahatonga ny fivoriana marobe voalahatra tamin'ny fifandonana izay tsy maintsy namerenako ny laoniny. Somary mahasosotra ihany. Maniry izany aho G Suite nanolotra ny fahaizana hisoratra anarana amin'ny kalandrie hafa ary asio default toy ny be asa amin'ny kalandrie voalohany.
Ny vahaolana nataoko dia nitondra vahaolana mahafinaritra, SyncThemCalendars. Niaraka tamin'ny lampihazo aho dia afaka nanampy fampifanarahana roa… isaky ny kaonty tsirairay.
Fa maninona no ampifanaraho ny kalandrie azonao?
Mety misy tranga fampiasana maro amin'ity fampiasa ity. Azonao atao ny manakana ny fotoana amin'ny kalandrie hiasanao miorina amin'ny kalandrie manokana / manokana anao. Azonao atao ny maka tahaka ny zava-nitranga rehetra avy amin'ny kalandrie ekipa ho an'ny anao manokana. Na angamba ianao mpiasa tsy miankina miasa miaraka amin'ny mpanjifa maro samihafa ary te handrindra ny asanao.
Ny kaonty dia ahafahanao misoratra anarana amin'ny kalandrie voalohany ary avy eo mandrindra ny kalandrie 5. Mbola tsara kokoa aza, azonao atao ny manamboatra ny antsipirian'ny kalandrie, ao anatin'izany:
fampahatsiahivana - default dia nanala satria izany dia mety hiteraka alimanaka roa handefa fampahatsiahivana ho anao.
Color - manampy indrindra, azoko atao ny mamantatra ny fidirana kalandrie tsirairay misy loko manokana.
Fampiharana tranonkala kely tsara sy tsy lafo amin'ny fifanarahana isan-taona. Azoko antoka fa hamonjy ahy bebe kokoa noho ny vidiny any aoriana any izany.
Atombohy ny fitsapana maimaim-poana 14 andro anao
Fialana andraikitra: mpiara-miasa amin'i SyncThemCalendars
Tags: G Suitegoogle kalandriegsuiteahoana nofamokaranafandaharam-potoanafampitahana matetikaSynchronizesyncthemcalendars
Torohevitra dimy lehibe ho an'ny masoivoho mitady hamorona vola miditra vaovao amin'ny krizy